Colorless AF Coating Glass Glass China Manufacturer
Description:AF tapa-tavoara vita amin'ny fanorenana Glass,Colorless AF Coating,AF ny fitaratra tsy misy maso
Home > Products > Fitaovana fanodinana solosaina > Nano Coating for Glass > Colorless AF Coating Glass Glass
Colorless AF Coating Glass Glass
[ Tolo-tsarimihetsika simika ]
[Ireo endri-pifaneranana amin'ny faneriterena]:
2) manana hery fiarovan-tena ambony ary mamolavola tanteraka ny molekiola eo amin'ny faritra;
3) Tena tsara tarehy tsara, mangarahara ary ambany maivana;
4) Ny tebiteby avo lenta ambany sy ny fiantraikany tsara tsy mitongilana sy tsy lipophile;
6) Ny fiarovan-doha amin'ny fingon-damosina dia mitafy fanamafisana tsy misy fangarony;
7) Toetrany tsara sy maharitra ho an'ny totozy sy ny simika;
8) Kôlônera mivaivay ambany kokoa, ny fihetseham-po ambony amin'ny tanana.
[Anti tondro Vahaolana Fampisehoana fikirana Reference]
[Manaova mahatohitra Coatings A pplication Fomba]
2. AF-coating Usage :
Product Categories : Fitaovana fanodinana solosaina > Nano Coating for Glass
Fanamafisana ny fikojakoana AF aforitra ho an'ny fanorenana Glass Contact Now
Fahamendrehana Anti lany amin'ny fanodinam-patina ho an'ny fanorenana Glass Contact Now
Anti-stain Surface AF Coating Glass Glass Contact Now
Colorless AF Coating Glass Glass Contact Now
Yellowish Transparent AF Coating Glass Glass Contact Now
Ny tebiteby ambany amin'ny tora-pasika fanodinana ny felam-paty Contact Now
Fiarovan-tena tsy misy rano amin'ny fanamboarana Glass Contact Now
Loko indostrialy tsy misy lipophilika ho an'ny fanorenana Glass Contact Now
AF tapa-tavoara vita amin'ny fanorenana Glass Colorless AF Coating AF ny fitaratra tsy misy maso Fafan-drivotra AF ho an'ny fanorenana Glass Auto hoditra vita amin'ny sary fanaingoana Fiara vita amin'ny vera quartz Feno aretin-tsaina vita amin'ny tarehy Fikarakarana hoditra amin'ny fanadiovana fiara